डेनमार्कको सडकमा घन्काए नेपालीले पञ्चे बाजा
अप्रिल २५, २०१६
नेपालमै पञ्चेबाजाको प्रचलन घट्दै गएका बेला युरोपमा भने यसको रहर, आकर्षण र चाख भने फैलिँदो छ । डेनमार्कको कोपहेगन शहरमा त्यहाँका नेपालीले पञ्चेबाजा घन्काएका छन् । पञ्चबाजा कोपनहेगन शहरको मूल सडकमै घन्काएर पञ्चेबाजाको तालमा न्रित्यपनि देखाएका छन्...
प्रिथ्वी नारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता नमान्नेका तर्क यस्ता रैछन् (भिडियो)
जनवरी १३, २०१६
ईतिहास जित्नेहरुकै, बलियाकै लेखिन्छ । नेपालका एकिकरणकर्ता हुन् प्रिथ्वी नारायण शाह । उनले एकिकरण नगरेको भए नेपाल के हुन्थ्यो ? अनेक अड्कल र अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर राष्ट्र निर्माता प्रिथ्वी नारायण शाहलाई मानेपनि बिरोध गर्नेका तर्कपनि...
टर्कीले खसालिदियो रसियाको युद्दक बिमान (भिडियो)
नोभेम्बर २४, २०१५
टर्कीले रसियाको युद्दक विमान ध्वस्त पारिदिएको छ । रसियाली विमान सिरियाको युद्दग्रस्त क्षेत्र नजिक पुगेका बेला टर्कीले खसालिदिएको हो । टर्कीले आफ्नो हवाई क्षेत्रको सिमा नाघेर अनादर गरेकोले खसाइदिएको भन्ने दाबी गरेको छ । आफ्नो हवाई क्षेत्र...
भूकम्प पिडितलाई चाउ र बिस्कुट होइन, किला काँटी, घन र तार
धादिङको सेमजोङ डाँडामा कोही पुगेनन भन्ने खबर आएपछि म प्रकाश सुबेदीजीलाई लिएर धादिङबेशी गएँ । त्यहाँ अन्नपूर्ण पोष्टका साथी मनिष दुवाडी र अर्का पत्रकार महिन्दो वाईवा जोडीनु भो । त्यताको मेसो उहाँहरुले मिलाउनु भो । महिन्दोजीको घरको...
संसदभित्र भएको मारपिटको भिडियो हेर्नुस्
जनवरी १९, २०१५
माउ मारेर बाँदरको बच्चा जोगाउने चितुवा (भिडियो)
जुलाइ ७, २०१४
लाहादिमा नाम राखिएको एउटा चित्त (चितुवा) ले बबुन बाँदर मार्छ । उसले मारेको माउसित पुछारमा सानो बच्चापनि लर्खरिँदै, माउसितै लतारिँदै आएको माउलाई मारिसकेपछि चितुवाले बल्ल मेसो पाउँछ । त्यसपछि त्यो चितुवाको क्रियाकलाप पुरै बदलिन्छ र बबुनको बच्चालाई...
करोडौं ठगेर बैंक फरार, निर्देशकलाई गरे पिडितले नजरबन्द (भिडियो सहित)
जुन २८, २०१४
नेपालमा अब नयाँ धन्दा शुरु भएको छ । त्यो हो, बैंक खोल्ने । त्यसपछि फाइनान्सियल कम्पनी खोल्ने । अरुले भन्दा चर्को ब्याज दिन्छु भन्दै लोभ्याएर जनताको रकम सोहोर्ने । त्यसपछि करोडौं रकम जम्मा पारेर फरार हुने ।...
“कांग्रेसकै कार्यकर्ताले युरो कांग्रेसलाई धमिलो बनाए” गुरुङ
मे ७, २०१४
“युरो कांग्रेस वैधानिक हो । इन्द्र क्षेत्री र गंगाधर गौतमको ब्यक्तिगत द्धन्दको कारण युरोप भरिकै कांग्रेसमा हिलो छ्याप्ने काम भएको छ” दिल गुरुङ । युरोपमा नेपालि कांग्रेस स्थापना र भूमिकामा सधैं रहेका ब्यक्ति हुन, दिल गुरुङ । हिमाल...
पत्रकारलाई निचोरेर ककसले ठिक पार्ने भए बेल्जियममा ?
सेप्टेम्बर २२, २०१३
बेल्जियममा भैरहेको अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको अवशरमा बिभिन्न संघ संस्थाका पदाधिकारिहरु भेला भए । त्यसदिन नेपाल फेस्टिबल गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने मतमतान्तर पनि थियो । अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाकै सामुन्ने । नेपाल फेस्टिबलका पक्ष र बिपक्षले नेपाली नेपाली बिचको...
गौत्तम बुद्दबारे भ्रम छर्न जी टिभीमा ‘बुद्द’ कार्यक्रम
सेप्टेम्बर ७, २०१३
भारतीयहरुले अब गौतम बुद्दबारे झन भ्रम छर्न कस्सिएका छन् । उनीहरुले भर्खरै एउटा कार्यक्रमनै शुरु गरेका छन् । साप्ताहिक कार्यक्रम । जी टिभीबाट सञ्चालन गरिएको त्यस कार्यक्रमको नामनै ‘बुद्द’ राखिएको छ । यसको पहिलो कार्यक्रमपनि गरिसकेका छन्...